Nhazi - Zhongshan City YALIS Akụrụngwa Ngwaahịa Co., Ltd.
6072 Magnetic Silent Mortise mkpọchi
Ebe Anya 72mm
Azụ Ntọala 60mm
Ule Nyocha 200,000 ugboro
Igodo nọmba Igodo 3
Ọkọlọtọ Okpụrụ EURO
Noise: Nkịtị: n'elu decibel 60; YALIS: Ihe dị ka decibel 45.
1. Kemeghi iku ikpe, nke na-eme echichi ọzọ kpọmkwem na belata echichi isi ike.
2. Wuru ụdị mpempe L dị n'ime iji hụ na ụzọ ntụgharị nke ihe nkwụsị na-adaba na ntụgharị ihu nke mkpọ ahụ, nke mere na ọrụ nke mkpọ ahụ na-adịkwu nro.
3. A na-etinye gaskets nkịtị site na mmiri mmiri na mkpọchi ahụ na n'okwu ikpe iji belata mkpọtụ nke mkpọchi mortise na-arụ ọrụ.
4. A na-ekpuchi bolt na oyi akwa nke naịlọn iji belata esemokwu ma mee ka ọ dị jụụ.
Kedu ihe mgbu ahịa a na-edozi site na YALIS Magnetic Mortise Lock?
1. Nhazi usoro nke ahụ mkpọchi na ahịa gbagwojuru anya na ngagharị nke mkpọchi ahụ adịghị mma. Ya mere, iguzogide mgbe ejiri aka na-agbanye aka n'ọnụ ụzọ buru ibu, na-ebute ndụ ọrụ dị mkpụmkpụ nke ọnụ ụzọ.
2. The echichi ọnọdụ nke iku ikpe na ahịa bụ ofu na-apụghị kemeghi mgbanwe flexibly, nke dịkwuo ike nke echichi.
3. Mgbe ọtụtụ mkpọchi mkpọchi n'ahịa na-arụ ọrụ, ịdị mma nke mkpọchi ahụ adịchaghị mma, ụda mkpọchi dị n'etiti ihe mkpọchi mkpọchi mkpọtụ na-ada ụda nke ukwuu, nke na-ebelata oke nsị.
5mm Ultra-mkpa Rosette & Spring Mechanism
Nhazi usoro mmiri nke njikwa rosette dị ugbu a n'ahịa dịkarịsịrị arọ, na-erepịa ọtụtụ akụrụngwa, ọ dịkwa njọ karịa na ọdịdị, nke anaghị egbo mkpa ịchọ mma nke ndị otu ahịa. YALIS ultra-thin rosette na mmiri ka eji zinc alloy nwere ọkpụrụkpụ naanị 5mm. E nwere mbugharị mmiri n'ime, nke na-ebelata ọnwụ nke mkpọchi ahụ mgbe a na-agbanye aka ahụ, ọ dịghịkwa mfe ịkwanye mgbe ejiri ya ogologo oge.
1. Okpukpo nke rosette na-edozi na-ebelata naanị 5mm, nke dị obere ma dị mfe.
2. E nwere otu ụzọ nloghachi mmiri n'ime ihe owuwu ahụ, nke nwere ike belata ọnwụ nke mkpọchi ahụ mgbe a na-agbanye aka n'ọnụ ụzọ, nke mere na a na-agbanye ọnụ ụzọ ụzọ ma na-emegharị ọnụ ụzọ ka ọ dị nke ọma, ọ dịkwa odighi mfe ikusi.
3. Nhazi uzo abuo abuo: Ogugu uzo ogugu na-achota na nkuku uzo nke uzo uzo di oke, nke na eme ka ndu ndu nke uzo.
4. Ihe atumatu a sitere na zinc alloy, nke nwere nkasi obi di elu ma gbochie nbibi.
Obere Structure & Rosette & Escutcheon
N'oge a, ihe dị n'ime ime dị elu na-ewu ewu maka njikọta ọnụ ụzọ na mgbidi, ya mere ọnụ ụzọ ndị nwere obere ụzọ dị ka ọnụ ụzọ a na-adịghị ahụ anya na ọnụ ụzọ dị elu apụtawo. Kinddị ọnụ ụzọ a pere mpe na-a paysa ntị na ntinye ọnụ ụzọ na mgbidi iji mee ka nsonaazụ anya ya niile. Ya mere, YALIS mepụtara usoro mmiri eji egwu mmiri na ntinye ngwa ngwa iji belata oke rosette na escutcheon. Site na itinye usoro mmiri na ntinye ihe ntinye n'ime oghere ọnụ ụzọ, a na-echekwa rosette na escutcheon n'ogo dịka ọnụ ụzọ na mgbidi dịka o kwere mee. Ọ bụ karịa na ụdị ngosipụta nke ọnụ ụzọ na njikọta mgbidi.
Iji nwee ike ịchọta ọnụahịa ahịa nke ọnụ ụzọ iko enyo, yana itinye ọtụtụ ụzọ ọnụ ụzọ na-ere ọkụ nke YALIS mepụtara n'ime afọ iri gara aga iji mepee ọnụ ụzọ ụzọ iko, YALIS weputara splint iko ahụ. Ihe nkedo iko a bu akwa mmiri n’agbata onu uzo iko na onu-uzọ iko, ma nwee ike igbo mkpa nke ndi ahia di iche iche nke nwere uzo uzo 3. Enwere ike idobe splint splin na ọnụ ụzọ niile nke YALIS. Enwere eriri roba na splin iji gbochie ịpụpụ. Designdị dị mfe na ụdị ọhụụ na-eweta ụdị dị iche na ụlọ dị mfe.